ဖေကြီး (လေရှီး) - ဘုန်းနိမ့် ကံနိမ့် မအေရိုး ကြင်စိုး - MoeMaKa Media
Home / Literature / Satire / Sir Thawdow( Pe Gyi Layshee) / ဖေကြီး (လေရှီး) - ဘုန်းနိမ့် ကံနိမ့် မအေရိုး ကြင်စိုး
ဖေကြီး (လေရှီး) - ဘုန်းနိမ့် ကံနိမ့် မအေရိုး ကြင်စိုး
Literature, Satire, Sir Thawdow( Pe Gyi Layshee)
ဘုန်းနိမ့် ကံနိမ့် မအေရိုး ကြင်စိုး
မနှစ်ကနွေဦးကတည်းက အဝတ်အစားလေးသုံးလေးစုံကို ရုတ်တရက်ချက်ချင်းကောက်ထည့်ပြီး ယာ ယီခရီးထပြီးထွက်လာခဲ့ရတဲ့ဖေကြီးဟာ မိုင်တွေ ရာပေါင်းများစွာရှိခဲ့ပါပြီ။ ဟိုမြို့ဖြတ် သည်ရွာကျော်ခဲ့တဲ့ ခြေရာတွေဟာလည်း သိန်း သန်း ကုဋေ ကုဋာ ရှိခဲ့ပြီးပေါ့ခင်ဗျာ။ ရွာစဉ်ရွာဆက် အတော်များများမှာ ခေတ္တခဏ ခိုနားမှေး စက်ခွင့်ရခဲ့ပြီး အခုအဘစောမူးသာတို့ရွာမှာတော့ နည်းနည်းကြာပြီ။
ပုံတိုပတ်စအပြောကောင်းတဲ့ ခပ်တည်တည်နဲ့ ရယ်ရွှမ်းပတ်ရွှမ်း ထထဖောက်တတ်တဲ့ အရင်တုန်းက သံချပ်တွေဘာတွေ ရေးခဲ့ဘူးတဲ့အမဲလိုက်ကောင်းတဲ့ ဟင်းချက်ကောင်းတဲ့သီချင်းတွေအဆိုကောင်းတဲ့ အဘစောမူးသာနဲ့တွေ့လိုက်တိုင်း ရင်ထဲကအပူတွေ လျော့ပါးရတာကတော့ အမှန်ပေါ့ ခင်ဗျာ။
အဘစောမူးသာက 'အိမ်ဘက်လှည့်ခဲ့အုံး' ဒီနေ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား အားကစားလုပ်ဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့ လှမ်းပြောပါတယ်။ အဘစောမူးသာတယောက် ဘာတွေများ 'ဖောက်' အုံးမလဲမသိဘူး ခင်ဗျ။
မုန်တိုင်းကြောင့်ရွာနေတဲ့ မိုးထဲလေထဲမှာပဲထွက်လာခဲ့ရတာပေါ့ ခင်ဗျာ။ အဘစောမူးသာတို့အိမ်ရောက်လို့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှား' အားကစား ' လုပ်လိုက်ရင် အချမ်းတွေပြေသွားမှာပေါ့ မိတ်ဆွေရာ။
မိုးရွာနေတော့ မန်ကျည်းပင်အောက်ကွပ်ပစ်မှာမရှိကြဘူး။ အိမ်ခြေရင်းဘေးမှာ အဖီဆွဲထားတဲ့ နွားတင်း ကုတ်အကျယ်ကြီးထဲကနေ အသံတွေကြားနေရတယ်ဗျ။ နွားတင်းကုတ်ကြီးက တော်တော့်ကိုကြီးတာ၊ နွား ငါးရှဉ်းလောက် ဆယ်ကောင်လောက်ဆံ့မယ်။ အခုတော့ 'စက်' တွေသုံးနေလို့ နွားတွေလျှော့လိုက်ပြီး နှစ်ရှဉ်းပဲ ထားတော့တယ်တဲ့။
" ဂိုး . . . ဂိုး . . . ဂိုး . . . "
" ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား . . . "
နွားတင်းကုတ်ထဲမှာ ဘောလုံးကန်နေကြတာထင်တယ်။ အထဲရောက်တော့မှ မြင်ရတွေ့ရတာက အခြားတမျိုးကိုးဗျ။
" လာ လာ . . . ဖေကြီး လာ . . . "
" ပစ်ကြမယ် . . . ကစ်ကြမယ် . . . "
ဂိုးကျဉ်း ဂိုးကျယ်တွေတော့ မဟုတ်ဘူး။' ပါးစပ်ကျဉ်းပါးစပ်ကျယ် ' တွေ ခင်ဗျ။
တစ်နေရာမှာ ' မအလ ' တို့ ' လက်ဖက်ခြောက် ' တို့ ' ဇော်မဲလုံး ' တို့ရဲ့ ပါးစပ်ကြီးတွေဖြဲနေတဲ့ပုံတွေကို ဗွီနိုင်းကြီးတွေထုတ် ပါးစပ်နေရာတွေဖောက်ပြီး သုံးထပ်သားချပ်တွေမှာ ကပ်ထားတာခင်ဗျ။
အဲသည်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ ပါးစပ်ပေါက်တွေထဲကို နွားချေးတုံးကြီးတွေ ပစ်ပစ်သွင်းပြီး ' တဝါးဝါး တဟားဟား ' ပျော်နေကြတာကိုး။ 'မအလ' တို့ 'လက်ဖက်ခြောက်' တို့ 'ဇော်မဲလုံး' တို့ရဲ့ ပါးစပ်ပြဲပြဲရုပ်ကြီးတွေကလည်း တအား တအားကို ရယ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာများဗျာ။
" ဆန်ဖရန်စစ္စကိုမှာလည်း ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ရုပ်ပုံတွေကိုသုံးပြီး ရန်ပုံငွေပွဲကြီးတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပဲ အဘစောမူးသာရ "
" အေးကွ . . . အဲသည်မှာတော့ 'မအလ' တို့ 'သူ့မိဖုရားခေါင်ကြီး' တို့ပုံတွေကို အဓိကအသုံးချပြီး ရန်ပုံငွေရှာနေတာ အတော်ရဆိုပဲ ဖေကြီးရ "
" ဟုတ်တယ် သူငယ်ချင်း မူးသာရ . . .ဟိုနေ့ကတင် အမေရိကန်ဒေါ်လာတစ်သိန်းကျော်၊ ဗမာငွေနဲ့ဆိုရင် ကျပ်သိန်းနှစ်ထောင်ကျော်လောက် ရဆိုပဲဟ "
" ငါဖတ်လိုက်ရပါတယ် ရစ်ချတ်ရ . . .
' နာမ်နှိမ်ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲ ' ပါတဲ့ဗျား . . .ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား "
" ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား ဟား "
ထိုပွဲမှာ မအလကို ထမီစလွယ်စွတ်၍ ဂုဏ်ပြု ချီးမြှင့်ခြင်း၊ ကြိုးပေးကွက်မျက်သည့်ခလုတ်ကို ဘောလုံးဖြင့်ပစ်ပေါက်မောင်းဖြုတ်ခြင်း ကစားနည်းများလည်း ပါဝင်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဘောလုံးသုံးလုံး ပစ်ပေါက်ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီး ၅ ဒေါ်လာနဲ့ ပါဝင်ကစားနိုင်တယ်တဲ့ ခင်ဗျ။ ရရှိတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တွေအတွက် အသုံးပြုသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
" မူးလာရေ . .ဟေ့ မူးလာ . . နွားချေးခြောက် အနေတော်အတုံးကလေးတွေသွားကောက်ပေးပါအုံးဟ "
အဘစောမူးသာပြောတော့ သူ့မြေးမူးလာလည်း နွားချေးခြောက်သွားယူပြန်ပါသဗျ။
သူ့မြေးသွားနေတုန်း အဘစောမူးသာနဲ့ရေနွေးသောက်ကြရင်း ဟိုပြော သည်ပြော တဝါးဝါးပေါ့ ခင်ဗျာ။
" ဖေကြီးရေ . . . မိုးလေးအေးအေးနဲ့ ရေနွေးတွေလည်းသောက်ထားတော့ ဆီးလေးဘာလေးများ မသွားချင်ဘူးလား "
" သွားချင်နေတာပေါ့ အဘရဲ့၊ တင်းနေပြီ "
" ဒါဆိုလည်း ဟိုးနံရံနားမှာ တွေ့လား၊ အပေါ့သွားခန်းလေး စပယ်ရှယ် ဖန်တီးထားတယ်၊ အဲသည်အထဲသွားပြီး အားရပါးရသာကော့ပန်းပေတော့ဗျား ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား . . . . . . "
သူ့ " တဟားဟား " မှာလဲ လျှို့ဝှက်အနက်အဓိပ္ပာယ်တစုံတရာ ကိန်းအောင်းနေတယ်ဆိုတာ ဖေကြီး ခံစားမိပါတယ်။
အပေါ့သွားအခန်းလေးရဲ့ ဝါးထရံနံရံပေါ်မှာလည်း မအလရဲ့မျက်နှာပုံကြီးကို ခပ်နိမ့်နိမ့်လေး ကပ်ပေးထားတယ်ခင်ဗျ။ ဒါနဲ့ ဖေကြီးလည်း အားနာနာနဲ့ပဲ ရတနာရွှေပြွန်ကနေ ရေသွန်တော်မူကာ မျက်ခွက်အနှံ့ ပန်းထည့်လိုက်ပါတော့တယ်ခင်ဗျ။ ပန်းပြီးတော့ ကျေနပ်ပီတိဂွမ်းဆီထိ ပြုံးဖြဲဖြဲမျက်နှာကြီးနဲ့ ပြန်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့။
" ဘယ်လိုလဲ ဖေကြီး . . . ပေါ့ပါးသွားပြီမဟုတ်လား . . ဟားဟားဟားဟားဟား"
" ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား . . . . "
" ကဲ . . . ရော့ ရော့ . . . ဟောသည်မှာ ဒီနှစ် ဦးဦးဖျားဖျားရတဲ့ ထန်းရည်ဟ၊ အားရပါးရ တခွက်ပြီးတခွက် ဆင့်ဆင့် ချလိုက်အုံး။ ခဏနေရင် နောက်တခေါက်သွားပြီး အားရပါးရ ပန်းလိုက်ပါအုံးဗျား . .
. . . ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား . . "
" ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား . . . .အဘစောမူးသာရဲ့ ' နာမ်နှိမ်နည်းစနစ် 'ကလဲ မဆိုးပါလားဗျ "
အမေရိကားမှာ ရန်ပုံငွေရှာဖွေပွဲတွေလုပ်နေတဲ့လူတွေဆီကိုသာ အဘစောမူးသာလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပို့လိုက်ရင် ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဗျာလို့ ဖေကြီးကပြောတော့ 'တဟားဟား' ရယ်နေပြန်ပါတယ်။
" ယောက်ျားသေးပန်းခွက်မှာလဲ မအလ ပါးစပ်ကြီးဟထားတဲ့ပုံ ကပ်ပေးထားမယ်၊ မိန်းမ အိမ်သာကမုတ်မှာလည်း မအလ ပါးစပ်ကြီးဖြဲဟနေတဲ့ပုံကို ကပ်ပေးထားမယ် . . . တခါဝင် ၅ ဒေါ်လာပဲပေါ့ကွ . . အာဟ . . အာဟ . . . အာဟ . ."
" ဟားဟား ဟားဟား ဟားဟား . . . . .
သေးထွက်တော့မယ် အဘရေ . . . . . "
" ပြေး ပြေး ပြေးလိုက်ပါ. . .အခန်းကို ပြေးလိုက်ပါ . . .ပန်း ပန်း ပန်းထည့်ပါသည်သောက်ခွက်ကြီးမှာ "
(8-5-22)Sun 7:15 Pm
ဖေကြီး (လေရှီး) - ဘုန်းနိမ့် ကံနိမ့် မအေရိုး ကြင်စိုး Reviewed by k on 6:50 AM Rating: 5
Sir Thawdow( Pe Gyi Layshee)